Maxaa kala haysta hawsha guriga iyo ragga Soomaalida ee qurbaha ku nool? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
STN News March 6, 2018 Leave a comment
“Shaqooyinka guriga ee sida dabiiciga ah Alle u fududeeyay dumarka Ayaan qabtaa. Axmed wuxuu qabtaa wixii culus oo dhan sida guriga wax ka bedelkiisa iyo adeegga ayuu qabtaa”, ayey tiri Hibo Cumar.
Jowhari ayaa sheegay in sida xaqiiqada ah ay mararka qaar dhacdo inuu quraacda u kariyo una diyaariyo reerka. “Gabdhaheyga inay cunaan quraac aan kariyay way dhacdaa, ayuu yiri.
Hibo Cumar ayaa tiri: “isbedelka ayaga (qoysaska) ma ahan, balse wuxuu la socdaa meesha ay ku nool yihiin. Qoyska markuu Soomaaliya joogay wuxuu haystay gargaar. Culeys badan haweeneyda kuma dhaceyn, ninkana ma saarnayn”.
“Qoyska wuu ballaaran yahay oo qaraabo badan ayaa ka mid ah. Laakiin marka halkan (Yurub) la joogo isbedelka ugu weyn ee reerka ku dhacay wuxuu yahay; labadii qof keligood bay noqdeen. Xaaskii iyo ninkii qabay cid la joogto malahan.”
Waxay intaa ku dartay “reerku wuxuu ku kooban yahay labadii qof iyo wixii ay dhaleen. Marka culeyskii Afrika yaalay mid ka badan ayaa yimid”.
Isagoo xaaskiisa ku taageeraya hadalladaas wuxuu yiri: “Markii Afrika la joogay, ma dhici jirin in uu ninka guriga xaaqo amaba jikada galo, in uu ilmaha xafaayadda ka badalo amaba caana uu siiyo”.
“Maxaa keenay hadaba isbedelka?” ayuu isweydiiyay Axmed Jowhari, wuxuuna isugu jawaabay “Meeshan lagu nool yahay ciriiriga ka jiro ayaa keenay. Maxaa yeelay, cid ku caawineyso oo bannaanka kaaga imaaneyso ma jirto”.
Waana taas sababta ay raga gacan uga geystaan shaqada guriga sida ay aaminsan yihiin dad badan. Sidoo kale Axmed Jowhari oo lamaanayaasha la taliyo wuxuu sheegay in “muran iyo is fahan la’aan arrimahaasi la xiriira ay dhaliyaan in reero badan ay dumaan, marka qurbaha la yimaado”.
Wuxuu Axmed Jowhari sheegay in guurka ka hor xitaa ay dhallinta iyo qofka doonaya in uu aqal galo ay siiyaan talooyinka “Liibaanta qoyska”.
Wuxuu sheegay: Waxaan fahan siinaa “meesha uu dhibka ka imanayo, oo ay tahay in la is kaalmeysto ee aan lagu mashquulin qof”.
Hibo ayaa dhankeeda sheegtay in ahmiyadda uu guurku leeyahay ay tahay. “Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qofka uusan u baahneyn qofka kale, balse waa taa caksigeeda, oo seyga iyo oorida midba midka kale waa uu u baahan yahay”.
← QM: Isir sifeyn ayaa wali lagu hayaa Muslimiinta Rohingya
Dad badan oo ku dhintay hilib sumaysan dalka Koonfur Afrika →